Lọ nke Peles | Akụkọ Njem
Maria | | Romania, njem
Otu n’ime ebe ndị njem bịara abịa na Romania bụ Sinaia, bụ́ obodo dị n’elu ugwu na Ndagwurugwu Prahova nke a maara n’obodo ahụ maka mmiri ọgwụ ya, nke a na-enwe ekele maka nnu ya maka ọgwụgwọ dị iche iche. Na nke a, anyị ga-agbakwunye ụlọ nkwari akụ, casinos, slopes na akara nke Sinaia: Castles nke Peles, ụlọ nke Neo-Renaissance architecture na Saxon metụrụ.
Formerlọ obibi mbụ nke ezinụlọ ndị eze, nke gbanwere ugbu a na ụlọ ngosi ihe nka, bụ otu n'ime ebe ndị kachasị eleta na mba ahụ mgbe Bran Castle (nke a maara dị ka Castle Dracula). N'isiokwu na-esonụ anyị na-enyocha akụkọ ntolite ya na nkọwa niile iji leta ya.
1 Akụkọ banyere Castle Castle
2 Nleta na Castle Castle
3 Akpa ala njegharị
4 Mpụga na ubi
5 Ahịa tiketi
Akụkọ banyere Castle Castle
N'ịbụ nke dị ná mpụga obodo ahụ, aha nke nnukwu ụlọ ahụ nwere ike inye anyị echiche na ọ gaghị adabara ezigbo usoro nke ụlọ ahụ ebe ọ na-egosi na ọ nweghị ọrụ nchebe. N'ezie, ewughị ya na Middle Ages mana na narị afọ nke XNUMX ka ọ bụrụ ebe obibi nke oge ọkọchị maka Eze Charles nke Mbụ nke Romania na nwunye ya nke Elizabet nke Wiedn.
N'ụlọ a, eze chọrọ iju ụlọ ikpe Europe anya site na ngwakọta nke oge a na okomoko nke na-ahapụghị enweghị mmasị. Ọrụ ndị ahụ malitere na 1873 mana agwaghị ụlọ ọrụ ahụ ruo 1914. Ọ bụ otu n'ime ụlọ mbu na kọntinenti ka enwere kpo oku, ọkụ eletrik, mbuli elu, nsị na ekwentị.
Na ngwụsị nke 40s nke narị afọ gara aga, ihe onwunwe nke Peles Castle gafere n'aka ọchịchị ndị ọchịchị Kọmunist ma ghọọ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na 50. Ọnụ ụzọ ya mechiri n'etiti 1975 na 1990.
Mgbe esemokwu dị ogologo, na 2007, ndị nketa nke ọchịchị Romania natara Peles Castle ma gbazite ya na steeti iji gaa n'ihu na-arụ ọrụ ya dị ka ụlọ ngosi ihe nka nke mba.
Nleta na Castle Castle
Peles Castle bụ ihe dị egwu ma n’ime na n’èzí. Gwakọta ụdị dị iche iche dịka Neo-Baroque, Neo-Renaissance, Oriental ma ọ bụ Rococo na njem nke nnukwu ụlọ na-enye anyị ohere ịmara ha niile.
Isi njegharị ahụ na-ewere ọnọdụ n’elu ala ma bụrụkwa nke kachasị ịtụnanya dịka ọ gụnyere nnukwu oghere nke nnukwu ụlọ ahụ, belụsọ ụlọ nkeonwe. You nwere ike ịkwụ ụgwọ mgbakwunye iji gbakwunye njem ala nke mbụ na njem ndị bụ isi.
Nleta ahụ malitere na Hall of Honor, otu n'ime ebe kachasị mma na Peles. A na-eji osisi ukpa etinyere mgbidi ahụ, bas-reliefs na ihe ọkpụkpụ alabasta. Lọ ahụ nwere mpempe iko nwere ike iwepu ya iji lelee igwe n'oge ọkọchị.
Roomlọ nke ọzọ bụ Halllọ Nzukọ nke Ogwe Aka, nke nwere nchịkọta agha na ịchụ nta nke ihe dịka iberibe 4.000, nke kachasị nke XNUMXth - XNUMXth century. Thezọ njegharị ahụ na-aga n'ihu site na Office nke King Carlos I na Royal Library, ụlọ abụọ ejiri osisi oak chọọ mma.
Foto | Ialọ ahịa njem nlegharị anya nke Romania
Ozugbo, anyị gafere Roomlọ Egwú ebe anyị nwere ike ịtụgharị uche na ọtụtụ ihe ochie. Mgbe ahụ, ime ụlọ Florentine, nke nnukwu ọkụ ọkụ ya na-adọta mmasị. Ọ na-esote otu n'ime oghere ndị kachasị mma na nnukwu ụlọ. Ejiri ụlọ German Renaissance chọọ ụlọ ahụ dum mma. Ìhè ahụ na-abanye na windo windo mara mma nke nwere isiokwu banyere akụkọ ifo ndị German.
Na njedebe ikpeazụ nke njem ndị bụ isi anyị na-ahụ ụlọ abụọ kachasị mma: ime ụlọ Arab na ime ụlọ ndị Turkish. A na-eji nke mbụ, nke e ji nne peel na ọdụ́ chọọ mma, maka oriri nnabata eze na oriri tii. Nke abụọ abụrụ maka ị smokingụ sịga na nkata. N'ime ya, ihe eji achọ mma eji akwa silk chọọ ala, mgbidi na uko ụlọ pụtara ìhè.
Roomlọ ikpeazụ a na-eme njem nlegharị anya bụ Roomlọ ihe nkiri nke ,lọ ihe nkiri, bụ nke a gbanwere na sinima gburugburu 1906. Ihe kachasị mma banyere ụlọ ihe nkiri ahụ bụ ihe osise nke ókèala dị na mgbidi nke onye omenka Gustav Klimt mere. N'ebe a, njem ndị bụ isi na-ejedebe naanị ndị nwere tiketi maka njem nhọrọ nwere ike ịga n'ihu.
Akpa ala njegharị
N'akụkụ a ị nwere ike ịga na ime ụlọ ndị eze, ime ụlọ ịwụ na ụlọ ndị ọzọ nke ndị eze. Mgbe ị rịgooro na steepụ, ị ga-abanye na Concert Hall ebe eze nwanyị na-ahazi mgbede egwu ya.
Foto | Gaa njem
Mpụga na ubi
Ọ bụ ihe amamihe dị na idobere akụkụ nke nleta iji gafee ubi ebe a na-ahụkarị ihe osise nke ndị eze na ịtụgharị uche na ime ụlọ ebe a na-ere tiketi na mbido njegharị.
Nleta mbido (ala)
Okenye: 30 lei (6 euro odika)
Nbudata nleta + njem nlegharị mbụ
Okenye: 60 lei (euro 12,6)
Oge oyi (etiti Septemba - mmalite Mee):
Mọnde na Tuesday mechiri
Wenezdee site na elekere iri na otu nke ụtụtụ ruo elekere anọ nke ụtụtụ.
Ezumike nke ụbọchị site na 9:15 ụtụtụ ruo 16:15 elekere.
Oge ọkọchị (mmalite Mee - etiti Septemba):
Tuesday site na elekere itoolu nke ụtụtụ ruo elekere 9:16 elekere (naanị ala ala nwere ike ịga)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Romania » Leslọ nke Peles
Ogige osisi botanical nke Santa Katalina